Xasan Daahir Aweys oo ka hadlay xabsi gurigiisa iyo xiriirka Dowladda Somalia | Xaysimo
Home War Xasan Daahir Aweys oo ka hadlay xabsi gurigiisa iyo xiriirka Dowladda Somalia
Xasan Daahir Aweys oo ka hadlay xabsi gurigiisa iyo xiriirka Dowladda Somalia
Sheekh Xasan Daahir Aweys oo ah wadaad u xiran dowladda Soomaaliya ayaa faahfaahi ka bixiyey xabsi guriga uu ku jiro iyo eedeyn loo jeediyey oo ah inay adeegsado dowldda uu hoggaamiyo Madaxweyne Maxamed C/llaahi Farmaajo.
Isagoo soo duubay muuqaal cusub, una jawaabayey mid ka mida dadka baraha bulshada laga yaqaan ayuu Sheekh Xasan Daahir ayuu sheegay inaysan is arag madaxda dowladda Soomaaliya, markii kaliya ee wadahadalka ay ugu yimaadeenna uu ku adkeystay mowqifkiisa, kadibna ay ka tageen; kaliyana ay is arkaan ciidamada ilaaliya.
“Wuxuu intaas ku daray inay xoriyad kooban siisay dowladda, ayna xabsi guriga ugu dhasheen caruur, isla markaana uu siyaasadda ka hadlo, markii ay ku yiraahdeen inuu joojiyo siyaasadda uu ka hadlayana uu u sheegay in haddii ay doonaan ay afkana ka xiraan.
Sheekh Xasan Daahir wuxuu sheegay inuusan weligiis laaluush qaadan, isla markaana uu iska ilaaliyo xaaraanta, una xiran yahay hal kalmad, isagoo sheegay inuu xitaa waayey wax uu ku dayactirto guri uu leeyahay oo burbursan, wuxuuna iska fogeeyay wax xiriir ah oo uu la leeyahay madaxda dowladda, kaliyana uu difaacayo waxa uu aamisan yahay.
“Wadadaadda sida aniga oo kale ee xiran ma haystaan inta aan heysto.. waana uga mahad celinayaa dowladda..” ayuu yiri Sheekh Xasan Daahir oo caddeeyay inuusan ka tanaasulin fekerka diiniga ah ee uu u xiran yahay.
Wuxuu sheegay inuu C/raxmaan C/shakuur ku heyso arrin Diini ah, cid ka celin kartana aysan jirin, xitaa kuwa qabiilka ku difacayana uu ka yaqaan isaga ugana dhow yahay.
Xildhibaan Cabdullaahi Bidhaan oo markale xejistay kursigiisa Hop 235 ee BJFS
Cabdi Qawdhan oo noqday Xildhibaankii ugu horeeyey ee Aqalka Hoose oo...
Guddiga doorashada Reer Waqooyiga oo shaaciyey jadwalka doorashada 12 kursi
Dowladda Itoobiya: Waxba iskama badelin mowqifkeena ku aaddan SOOMAALIYA
Fahad Yaasiin oo sheegay inay is guursadeen haweenay Alshabaab xubin ka...
Waa kuwee wadamada lagu tegi karo baasaboorka Soomaaliga Fiisa la’aan?
Britain oo sheegtay in aqoonsiga Somaliland ku xiran wadahadal ay la...
Baasaboor Soomaaliga oo horumar ka sameeyay liiska caalamka
Soomaaliga kaliga ah ee ku xirnaa Guantánamo Bay oo la sii...
Puntland oo shaacisay jadwalka Doorashada Golaha Shacabka
Qaraxa lala beegsaday Gaari uu saarnaa Af-hayeenka Xukuumadda Macallimow
Waa kuma guddoomiyaha cusub ee Guddiga Doorashada Soomaaliya?
Madaxweyne Edrogan oo u tacsiyeeyay madaxweynaha Israa’iil
Guddiga bixiya abaalmarinta nabadda ee Nobel oo digniin u soo diray...
Cabdiraxmaan Faroole oo si weyn u dhaliilay Cumar Cabdirashiid